लोकसेवा पास गर्नेमा प्रदेश २ ले उछन्यो , ११४ विज्ञापनको नतिजा शून्य ! - Sabal Post
लोकसेवा पास गर्नेमा प्रदेश २ ले उछन्यो , ११४ विज्ञापनको नतिजा शून्य !
असोज २६ बुटवल । लोकसेवा आयोगले बिभिन्न पदका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेहरुको संख्या १० वर्षको अवधिमा ६ गुणाले बढेको छ । सबैभन्दा बढी आवेदन प्रदेश २ बाट परेको छ भने नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि प्रदेश २ कै सर्लाही जिल्लामा गरिएको छ ।
‘म किन गरीब ?भन्ने प्रश्नमा भगवान बुद्धले…
कम्प्युटर चलाउँदा तपाईंले थाहा पाउनै पर्ने Shortcut…
बाइस वर्षमा नभएका काम दुई वर्षमा भयो…
वैकल्पिक उर्जामा जर्मन सरकारले डेढ अर्ब बराबरको…